SAWIRRO: Sheekh Shariif oo qaatay shahaadada rasmiga ah ee Xildhibaanimo | Arrimaha Bulshada
Home English News News SAWIRRO: Sheekh Shariif oo qaatay shahaadada rasmiga ah ee Xildhibaanimo
SAWIRRO: Sheekh Shariif oo qaatay shahaadada rasmiga ah ee Xildhibaanimo
Bulsha:- Madaxweynihii hore ee Soomaaliya ahna Musharrax Madaxweyne, Xildhibaan Shariif Sheekh Axmed, ayaa maanta qaatay shahaadada rasmiga ah ee Xildhibaanimo, kaddib markii uu maalmo kahor ku guuleystay doorasha da kursiga HOP#146, oo ka dhacday caasimadda Dowlad Gobaleedka Hirshabeelle.
Sheekh Shariif ayaa u mahadceliyay Guddiga Hirgelinta Doorashooyinka heer Federaal ee FEIT, oo guddoonsiiyay shahaadada rasmiga iyo beesha uu kasoo jeedo oo u dooratay kursiga. Isagoo sheegay in uu rajeynayo in ay si nabad ah ku dhacdo doorashada Madaxweynaha JFS, oo loo madlan yahay 15-May.
“Waxaan maanta guddiga doorashooyinka heer federaal ka guddoomay shahaadada xildhibaanimo ee Golaha Shacabka BJFS kursiga tirsigiisu yahay #HOP146 waxaan u mahad celinayaa Bulshada leh kursiga oo ii gartay in aan ku matalo Baarlamaanka Federaalka Soomaaliya. Waxaan rajeynayaa in doorashada Madaxweynaha si nabad ah noogu qabsoonto.”